Bao no mpandresy ny Oscar ho an'ny Animated Short | Famoronana an-tserasera
Ny pataloha fohy animated dia afaka ao anatin'ny minitra vitsy hahagaga antsika amin'ny hafatr'izy ireo mahery. dia Bao ilay nandresy tamin'ny andiany faha-91 avy amin'ny loka Oscar ny loka ho an'ny Best Animated Short.
Bao dia momba reny sinoa manirery fa faly be izy hahafantatra fa ho lasa reny indray izy rehefa tonga tampoka ny iray amin'ireo baozis an-tranony.
Ity no tantaran'i Bao momba ny reny sinoa irery izay mijaly noho ny tsy fahampian'ny aretina amin'ny akanim-borona ary izany koa dia mitarika olana hafa toy ny fanekena fa amin'ny fotoana sasany dia handao ny tokantranony ny zanakalahy na ny zanany vavy hanomboka ny lalan'izy ireo manokana.
Ity fehezan-tsary fohy ity dia "extra" nandritra ny fanombohana ny Incredibles 2, noho izany avy amin'ny Pixar sy Disney. Notarihin'i Domee Shi sy Becky Neima-Cobb izany. Mifaninana amin'ny sokajy fampiroboroboana fohy miaraka amin'ny Fitondra-tena ho an'ny biby, hariva hariva, fitsangantsanganana kely iray ary faran'ny herinandro.
Fohy mihetsika miaraka amin'ny karazana famolavolana tena manokana ary noforonina tamin'ny 3D. Asa iray izay miavaka amin'ny fahaizany lehibe mitantara tantara ary mitondra antsika alohan'ny tantaran'olombelona tena izy.
Azonao atao ny milaza fa avy amin'ny toerana misy azy io a sary mihetsika lehibe, effets jiro ary io fomban'ny Pixar manokana io izay nahatonga azy ho iray amin'ireo mpitarika eo amin'ny tontolon'ny sarimiaina.
Mahaliana fa tamin'ity taona ity dia ny Adobe Photoshop sambany nahazo loka tao amin'ny Oscars. Ankoatra ny loka ho an'ny Animation Short tsara indrindra, ny sary mihetsika lehibe dia nalain'i Spider-Man: Izao tontolo izao vaovao.
Ny sarimihetsika Marvel dia efana maharesy an'i Pixar amin'ny tanety iza no manjaka tsara. Sarimihetsika notarihin'i Bob Persichetti, Peter Ramsey ary Rodney Rothman. Tsy maintsy ho hitantsika izao.
Ny fohy mihetsika manana izany eto amin'ny YouTube ianao mahita!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Nahazo ny Oscar ho an'ny Animated Short tsara indrindra i Bao 2019